Dabar goynta tirada badan: noocyada, cawaaqibka iyo muddooyinka | Shabakadda Saadaasha Hawada
dabar-goynta tirada badan
Jarmal Portillo | 06/05/2022 10:00 | Ciencia
Meeraheena waxa uu leeyahay in ka badan 4.500 milyan oo sano oo horumar ah. Muddadaas oo dhan waxaa dhacayay isbeddello kala duwan oo sababay in noocyo badan ay dabar go’aan. Xilliyadan oo ah dabar-goynta tirada badan maaha wax ku cusub meeraha dhulka. Cutubyadani waxay ku dhamaadeen ficil ahaan dhammaan noocyada noolaha wakhtigaas.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato dabar goynta tirada badan, sifooyinkooda iyo muhiimada ay u leeyihiin taariikhda meeraha.
1 Waa maxay dabar goynta tirada badan
2 Sababaha dabar goynta tirada badan
2.1 sababaha nafleyda
2.2 sababo deegaanka
2.3 sababo ka baxsan dhulka
2.4 sababo bani-aadmigu
3 Dabar-goynta baaxadda leh ee taariikhda Dhulka
3.1 Dabar-goynta Ordovician-Silurian
3.2 Devonian-Carboniferous dabar-goynta
3.3 Permian-Triassic baabi'inta
3.4 Triassic-Jurassic baabi'inta
3.5 Cretaceous - baabi'inta heer jaamacadeed
3.6 Dabar goynta holocene ama dabar goynta lixaad
Waa maxay dabar goynta tirada badan
Horta marka hore waa in aan ogaano in nooluhu uu dabar go’o marka aysan jirin wax muunado ah oo meel kasta kaga tagan meeraha oo taran kara kana tagi kara farac. Hadda, dabar-goynta baahsani waa mid ka mid ah saddexda nooc ee dabar-goynta ee jira. Aynu halkan ku aragno waxa loo yaqaan iyo waxa ay ku kala duwan yihiin.
Dabar goynta asalka ah: Waxay si aan kala sooc lahayn ugu dhacaan dhammaan biomes-ka waxayna si tartiib tartiib ah u baaba'aan.
Bakhtiinta tirada badan: taasoo keenta hoos u dhac aad u weyn oo ku yimaadda tirada noocyada ku nool aagga juqraafiyeed oo dhaca inta lagu jiro wakhti go'an.
dabar go'a baaxadda weyn: waxay si degdeg ah u dhacaan heer caalami ah, taasina waxay keentay in kala duwanaanshaha noole ee noocyada uu aad hoos ugu dhaco.
Sababaha dabar goynta tirada badan
Markaad akhrido qaybta hore, waxaa laga yaabaa inaad la yaabto sababta dabar-goynta tirada badan ay u dhacdo ama waxa sababa dabar-goynta tirada badan ee noocyada. Waxaa jira sababo badan oo ay noocyada baaba'aan, laakiin halkan waa qaar iyaga ka mid ah.
Tani waa meesha ay ka soo galaan ciyaarta sifooyinka noocyada iyo endemism ee suurtogalka ah iyo tartanka dhexdooda. Sidan oo kale, noocyada qaarkood, gaar ahaan noocyada duullaanka ee dhulkooda, ayaa barakici kara kuwa kale oo u horseedi kara inay dabar go'aan. Inta badan waayida asalka waxay ku dhacdaa noocyadan sababahan ah.
Sababaha deegaanka waxaa ka mid ah: isbeddelka heerkulka, isbeddelka heerka badda, isbeddelka wareegga biochemical, dhaqdhaqaaqa saxanka, tectonics saxan, iwm. Xaaladdan oo kale, haddii noocyada aan la qabsan karin xaaladaha nololeed ee cusub, waxay ku dhowdahay inay dabar go'aan. Dhankeeda, dhaqdhaqaaqa volcano sidoo kale waa qayb ka mid ah sababaha deegaanka ee inta badan horseeda dabar goyn ballaaran.
sababo ka baxsan dhulka
Uma jeedno Martians ama UFOs, laakiin waxaan u jeednaa saamaynta asteroids iyo meteorites ee dusha dhulka. Xaaladdan gaarka ah, dabar-goynta ayaa dhacay inta lagu guda jiro iyo ka dib saamaynta, sababtoo ah ka dib markii saamaynta ay sababeen isbeddel ah ee ka kooban yahay jawiga. saamaynta kale. Sababaha noocaan ah dartood, dabar-goyn baaxad leh ayaa dhacay, sida dabar-goynta dinosaurs la rumeysan yahay inay dhacday.
Waa sababaha ay gebi ahaanba sababaan hab-dhaqanka aadanaha. Tusaale ahaan, beeraha, macdanta, soo saarista saliida iyo kaynta, wasakhowga deegaanka, soo bandhigista noocyada kala duwan ee duurjoogta ah, ugaarsiga iyo ka ganacsiga duurjoogta iyo kulaylka caalamiga ah ayaa ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ee bini'aadamku u keeno hab-nololeedyada kuwaas oo shaki la'aan horseedi doona dabar-goynta noocyada.
Dabar-goynta baaxadda leh ee taariikhda Dhulka
Ma qiyaasi kartaa inta jeer ee dabar-goynta baaxadda leh ee dhacay intii lagu jiray taariikhda Dhulka? Dabcan waxaa jiray shan dabar oo dad badan. Xitaa saynis yahano badan ayaa sheegaya in aan la kulmeyno dabar go'an lixaad. Qaybtan, waxaan kuu sheegi doonaa xilliga juqraafiga, inta ay le'eg tahay, iyo sababta ay u dhacday dabar-goynta tiro badan.
Dabar-goyntii ugu horreysay waxay dhacday 444 milyan oo sano ka hor. Waxaa lagu qiyaasaa in ay jirtay inta u dhaxaysa 500.000 iyo 1 milyan sano, si in ka badan 60% noocyada ay noqdeen kuwo dabar go'ay. Waxaa jira aragtiyo dhowr ah oo ku saabsan waxa sababay dabar goyntan, sheegashada ugu xooggan ee ah in qaraxa supernova uu sababay isbeddel ku yimid heerka badda iyo lakabka ozone.
Waxay dhacday qiyaastii 360 milyan oo sano ka hor in ka badan 70% noocyada ayaa dabar go’ay. Dhacdadan dabar goynta oo socotay muddo 3 milyan oo sano ah, ayaa loo malaynayaa in ay ka bilaabmatay ka dib markii ay dillaaceen tubbooyin tufaax ah, oo hoos ugu dhacay qolofka dhulka oo ka soo jeeda meelo kulul iyo suunka foolkaanaha.
Dhacdadani waxay dhacday qiyaastii 250 milyan oo sano ka hor waxayna socotay hal milyan oo sano. dheelitirka, 95% noocyada badda iyo 70% noocyada berriga ayaa la waayay. Lama garanayo sababta dhabta ah, laakiin waxa lagu qiyaasaa inay ka dhalatay dhaqdhaqaaqa foolkaanaha, gaaska laga sii daayo xudunta dhulka, iyo saamaynta asteroid-ka.
260 milyan oo sanno ka hor, dhacdadan dabar-goynta baahsan ee milyan-sano ayaa baabi’isay 70% noocyada. Fikradaha sharaxaya sababta ay ka mid yihiin kala go'a Pangea iyo qarxinta foolkaanaha ee isdaba jooga ah.
Cretaceous - baabi'inta heer jaamacadeed
Waxay dhacday 66 milyan oo sano ka hor, waxaana laga yaabaa inay tahay dhacdadii ugu caansanayd ee dabar goynta guud ahaan, maadaama noocii Dinosaurs ee dhulka ku noolaa ay dabar go’een. Waxaa jira aragtiyo badan oo lagu sharraxayo sababta, inta badan waxay ku saleysan tahay dhaqdhaqaaqa sare ee volcano iyo saameynta asteroids-ka waaweyn. Gaar ahaan dhacdadan ayaa ah in aysan dilin oo kaliya dinosaurs, laakiin in ka badan 70% noocyada, waxayna socotay kaliya qiyaastii 30 maalmood.
Dabar goynta holocene ama dabar goynta lixaad
Dhacdadan gaarka ah ayaa abuurtay muran badan, ma aha oo kaliya sababtoo ah waxay dhici doontaa isla markiiba, laakiin sababtoo ah sababaheeda ayaa si fudud loo sameeyay. Xaqiiqda waa in heerka dabar goynta noocyada ay sii kordhayaan tan iyo markii horumarinta dhaqdhaqaaqa aadanaha, tusaale ahaan, naasleyda ayaa dabar go'aya iyagoo 280 jeer ka sarreeya inta caadiga ah. Sidoo kale, waxa la qiyaasayaa in noolihii dabar go’ay labadii qarni ee u dambeeyay (200) sano gudahood ay ku dabar go’aan 28.000 oo sano gudahood. Marka la eego tan, waxaa sii cad in aan wajahayno dabar-goyn lixaad leh.
Si aan u dhamaystirno fahamkayaga dabar-goynta baaxadda leh ee taariikhda Dhulka, waxaanu hoos ku siinnay wakhti go'an oo dabar-goyn baaxad leh.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto dabar-goynta baahsan iyo cawaaqibkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » dabar-goynta tirada badan
Soo noqnoqota oo aan waligiis lumin heerka sare ee joogtada ah, had iyo jeer waxay ka tagtaa nafteena sumad iyo farxad, mar walba maskaxda ku hay sii socoshada warkaan mahadsanid sxb